I-Mountainside Haven 1 igumbi lokulala
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguDanielle
Ibekwe kude phezulu kwiintaba zeLittle Qualicum Village, eli Khaya lePhupha yindawo yakho yokukhumbula nabahlobo okanye uphumle kwaye uhlaziye kwakhona. Yeyiphi indlela engcono yokuqalisa usuku lwakho kunokuvuka uphume ekuphumeni kwelanga kunye nemibono eqengqelekayo yehlathi eliluhlaza elineentaba kunye nolwandle. Ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ikofu enkulu yokungcamla, ibhafu eshushu yamanzi anetyuwa, indawo yomlilo eyenziwe ngamaplanga, i-WIFI, kunye necandelo elikhulu elitofotofo, sinazo zonke izinto eziluncedo zokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kwaye kukhumbuleke.
Eli khaya leSitayile soNxweme lwaseNtshona libonakaliswe ngemiqadi yeplanga kunye nemibono emihle. Phantsi kwizinyuko ezivulekileyo ukuya kwi-1000 sq. ft. non-legal suite (sihlala phezulu) vula iingcango zaseFransi kwipatio yakho exhotyiswe ngabantu aba-6 ibhafu eshushu yamanzi etyuwa, iihammocks ezimbini kunye nepatio lounger ukonwabela ukonwabela ngokupheleleyo. umbono kunye neendawo ezolileyo, ezifihlakeleyo.
Qaphela ukuba ngamanye amaxesha elinye lamagumbi okulala lisetyenziswa phantsi, nangona ikhitshi yonke, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ipatio, kunye ne-tub eshushu iya kuba yeyakho ngokupheleleyo!
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libonisa izixhobo ezitsha ezinje nge-2 burner induction stove top, umatshini we-espresso, i-oveni enkulu yeconvection toaster, iketile yegooseneck, imicrowave, ifriji kunye nesikhenkcisi. Sinetafile yasekhitshini ena4.
Igumbi lakho lokulala linomandlalo wepokotho we-coil ukumkani (ukhululekile kakhulu!) kwaye ineefestile ezintle ezimangalisayo. Igumbi lakho lokulala linolawulo lwethermostat yalo.
Igumbi lethu lokuhlala lishushu kwiziko elibaswe ngamaplanga- indawo yomlilo ilungisiwe kwaye ilungele ukuya kwindawo nganye ebekelwe yona. Uxhotyiswe ngecandelo elikhulu lesikhumba thatha ithuba leNetflix kunye neakhawunti yeendwendwe zeAmazon Prime, okanye ithala leencwadi lethu.
Tsala ifenitshala yepatio phantsi kophahla ngobusuku obucacileyo kwaye wenze iiyure zokujonga iinkwenkwezi. Kwimizuzu eli-15 kunokwenzeka ukuba ubone inkwenkwezi edubulayo! Khuphela usetyenziso: IStellarium Mobile-Imephu yeNkwenkwezi ukuze ubone ukuba zeziphi iinkwenkwezi kunye namakroza
Sisanda kunyamekela iinkuku ezi-3! KUBALULEKILE: ukuba uza nesilwanyana sasekhaya, ndicela singazihluphi iinkukhu. Izinja kufuneka zibopheleleke ngaphandle. $30/isilo-qabane
IMountainside Haven ikumgama wemizuzu emi-4 kuphela ukusuka kwindawo yokuFikelela kwiNdawo yaseLittle Qualicum River Falls yePhondo apho unokonwabela iingxangxasi ezininzi, imilambo, kunye namachibi. Kukho iilophu ezimbini zemizuzu engama-40.
Sibonelele ngepakethe yeenketho zebhonasi yephakheji ekhoyo ngomrhumo owongezelelweyo:
Isidlo sakusasa se-champs: amaqanda amatsha asefama, isonka sendawo, isoseji okanye ibhekoni, kunye nejusi yeorenji. Unceda umntu o-1 ngeedola ezili-17
I-Macro Smoothie: i-carbs, amafutha, kunye neprotheni yesidlo sakusasa esilungeleleneyo okanye i-snack.
Ngobisi lweenkomo, kunye ne-collagen powder. Unceda umntu omnye. I-10 yeedola
I-Charcuterie: Uluhlu lweesoseji zalapha ekhaya, iprosciutto, iminquma, itshizi, ii-crackers, ii-pickle kunye neziqhamo zonyaka. Inceda abantu aba-2. $50 (isaziso seyure ezingama-48 ukulungiselela ulutsha)
Shepherds Pie: Inyama yenkomo yasekhaya eneentlobo ngeentlobo zomxube wam okhethekileyo weziqholo, amakhowa, iitapile ezicujiweyo, kunye netshizi enyibilikisiweyo ngaphezulu. Ukutya okunentliziyo kakhulu ngosuku olubandayo. Unceda umntu om-1 - $20 (isaziso seeyure ezingama-48 sokulungiselela okutsha)
I-Seafood Platter: Yonwabela iintlobo ngeentlobo zokutya kwaselwandle, ii-oyster ezisandula ukunqunyulwa, iikeyiki zelobster crab, ngexesha lentlanzi, iiprawn eziqhotsiweyo, isuphu yeclam chowder, kunye newayini yalapha - inika umntu om-1 - $125 (isaziso seyure ezingama-48 ukulungiselela entsha)
Indawo ethe cwaka kakhulu kwaye engasese. Fumana umbono we-180 yeentaba kunye nolwandle ukuze uphumle kwaye uthobe kwiimbono!
Zininzi iindawo zokumisa amagcisa endleleni yakho yokuya endlwini. Uninzi lubonelela ngamaqanda, kunye neentlobo ngeentlobo zemifuno.
Uninzi lweevenkile eQualicum zivalwa ngentsimbi yesi-7 ngokuhlwa rhoqo. Nceda uqaphele oku ngokufika kwakho kunye nesicwangciso.
We are learning to live off the land, love being immersed in nature, and protecting and caring for the environment. More than ever, I love meeting guests and connecting about things that really matter. I work as a personal fitness trainer with a specific knowledge set in mobility, breathing, and eye drill training to improve performance and overall functionality. We are very open to socializing and love getting to know new people :)
We are learning to live off the land, love being immersed in nature, and protecting and caring for the environment. More than ever, I love meeting guests and connecting about thing…
Sizokubulisa emnyango ndikubonise isuti yakho. kuvuleke kakhulu ekuncokoleni :)